Iji sodium metabisulfite mee ihe dị ka mgbakwunye nri
Sodium Metabisulfite bụ mgbakwunye nri nri ọtụtụ ebe. Na mgbakwunye na mmetụta nchapu ya, ọ nwekwara ọrụ ndị a:
1) Mmetụta nke Anti Browning
Enzymatic Browning na-emekarị na mkpụrụ osisi, poteto, Sodium Metabisulfite bụ onye na-ebelata ihe, ọrụ polyphenol oxidase nwere mmetụta mgbochi siri ike, 0,0001% nke sọlfọ dioxide nwere ike belata 20% nke ọrụ enzyme, 0.001% nke sọlfọ dioxide nwere ike igbochi ya kpamkpam arụ ọrụ enzyme, nwere ike igbochi enzymatic Browning; Na mgbakwunye, ọ nwere ike iri oxygen na anụ ahụ nri ma rụọ ọrụ nke deoxygenation. Sulfite na mgbakwunye mmeghachi omume na glucose, gbochie glucose nri na amino acid glycoammonia mmeghachi omume, si otú a nwere mmetụta nke mgbochi Browning.
2) Antiseptik utịp
Sulfurous acid nwere ike rụọ ọrụ nke nchekwa nchekwa acid, ekwenyere na sulfurous acid na-egbochi yist, ebu, nje bacteria.E kwuru na sulfite a na-ekewakọtara na 1000 nwere ike karịa bisulfite na igbochi E. coli. Ọ bụ 100-500 oge siri ike yist biya na 100 ugboro ike ịkpụzi. Mgbe sọlfọ dioxide bụ acidic, ọ nwere mmetụta kachasị ike na -ebi microorganisms.
3, Ọrụ nke loosening gị n'ụlọnga
Enwere ike iji ya dị ka mmiri nke ịtọghe n'ụlọnga.
3) Antioxidant mmetụta.
Sulfite nwere mmetụta oxidation dị ịrịba ama n'ihi na sulfurous acid bụ ihe na-eme ka mbelata siri ike, nwere ike iri oxygen na mkpụrụ osisi na nzukọ nri, gbochie ọrụ nke oxidase, mbibi oxidation nke vitamin C na igbochi mkpụrụ osisi na akwukwo nri dị oke irè.
Usoro nke sodium metabisulfite:
A na-ekewa ịcha ọcha dị ka usoro ihe omume ya si dị abụọ: Oxidation Bleach na Mbelata ịcha ọcha .Sodium metabisulfite bụ onye na-eme ka ihe na-eme ka ọ dị ọcha.
Sodium metabisulfite nwere ike ịchapu site na mbenata ụcha agba agba nke ọtụtụ ogige ndị sitere na chromaticity dị na ngwongwo ha. otu nkekọ, organic okwu ga-atụfu agba. Foodfọdụ nri Browning na-ebute ọnụnọ nke ion ferric, ịgbakwunye ịcha ọcha ịcha ọcha nwere ike ime ka ion ion baa ion ferric, gbochie nri Browning.
Sodium metabisulfite na-agbapụ site na mgbakwunye nke sulfites. Anthocyanin na shuga nwere ike ịchapu site na mgbakwunye mmeghachi omume. Mmeghachi omume a na-agbanwe agbanwe, a ga-ewepụkwa sulfurous acid site na kpo oku ma ọ bụ acidification, nke mere na anthocyanin nwere ike ịmaliteghachi ma nwee ike weghachite agba uhie mbụ ya.
N'ime ụlọ ọrụ bisikiiti, a na-eji sodium metabisulfite eme ihe dị ka achịcha bisikiiti. Tupu iji ya, a kwadebere ya na ngwọta 20%, wee tinye ya n'ime mgwakota agwa na oge dị iche iche n'oge usoro mgwakota agwa.Due sulfur dioxide nke sodium pyrosulphate wepụtara na usoro nke mgwakota agwa, ike na ike nke ntụ ọka nwere nnukwu nnukwu, na obere mgbakwunye nwere ike igbochi nrụrụ ngwaahịa bisikiiti n'ihi oke ike. Enwere ike ịgbakwunye mgwakota agwa siri ike dịka ntụ ọka, na n'ozuzu oke mmanụ na shuga mgwakota agwa na ụtọ mgwakota agwa. dị ka o kwere mee ịghara iji, nke a bụ n'ihi na mgbakwunye nke mmanụ na shuga n'onwe ya egbochila mmụba nke mmiri protein, gbasaa nguzobe nke nnukwu gluten, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye sodium metabisulfite.
Ihe maka nlebara anya na ojiji nke sodium metabisulfite:
Ekwesịrị ịkọwa isi ihe ndị a mgbe ị na-eji sodium metabisulfite eme nri:
1) sodium metabisulfite reductive bleaching gị n'ụlọnga, ihe ngwọta ya ejighi n'aka ma bụrụ nke na-agbanwe agbanwe, ka e ji mee ihe ugbu a, iji gbochie enweghị ike sulite na mmekpa ahụ.
2) mgbe enwere ion ihe oriri, enwere ike ime ka sulphite fọduru di; O nwekwara ike ime ka ihe na-acha uhie uhie na-ebelata, si otú ahụ belata ịdị ọcha nke ọcha.
3) iji ihe eji agba ocha nke sulpite, n'ihi nhicha nke sọlfọ dioxide na ụcha dị mfe, yabụ na nri nri nri sọlfọ sọlfọ na-efu, mana ego fọdụrụ agaghị agafe ọkọlọtọ
4) Sulfuric acid enweghị ike igbochi ọrụ nke pectinase, nke ga-emebi njikọta nke pectin.Ọzọkwa, sulfurous acid na-abanye n'ime mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi, nhazi nke mkpụrụ osisi agbajiri, iji wepu sọlfọ dioxide niile, yabụ mkpụrụ osisi echekwara sulfurous acid dị mma maka ịme jam, mkpụrụ osisi mịrị amị, mmanya mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi candied, enweghị ike iji ya dị ka akụrụngwa maka ite.
5) Sulfites nwere ike ibibi thiamine, ya mere, ọ dịghị mfe iji nri azụ. 6) Sulfites dị mfe imeghachi omume na aldehydes, ketones, protein, wdg.
Nddị na Development:
N'ọhịa nhazi nri nke oge a, n'ihi na nri mgbe ụfọdụ na-amịpụta ụcha na-adịghị mma, ma ọ bụ ụfọdụ akụrụngwa nri maka ọtụtụ, njem, ụzọ nchekwa, buru oge ntozu oke, agba dị iche, nke nwere ike ibute agba ngwaahịa ikpeazụ abụghị Na-agbanwe agbanwe ma na-emetụta ụdị nri, ya mere, na nlebara anya taa maka ịdị mma nke nri, mmepe nke ihe na-egbu nri anaghị enwe njedebe, n'ezie, dịka ụdị ihe na-egbu nri, mmepe sodium metabisulfite dịkwa ukwuu. metabisulfite nwere ọrụ dịgasị iche iche, ọ bụghị naanị ọrụ nke ịcha ọcha, kamakwa ọrụ nke oxidation, ọrụ nke igbochi enzymatic Browning, ọrụ nke antisepsis, usoro mmepụta ya dị mfe ma dịkwa mma, yabụ n'ihe banyere ijide nchekwa nri , oghere sodium metabisulfite buru ibu buru ibu.
Natrium Hydrosulfite, Hydrosulfite, Calcium Bromide Ngwọta, Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite De Sodium, Calcium Bromide mmiri mmiri,